Kudlwengulwe ingane yaphonswa ebhulohweni | News24
Kudlwengulwe ingane yaphonswa ebhulohweni
IKHANSELA lase-Ashdown uMnu Dumisani Phungula usekhiphe isexwayiso sokuba umphakathi uhambe uqaphele kule ndawo ngaso sonke isikhathi ngenxa yobugebengu obuqhubekayo.
Lokhu kulandela isigameko sokudlwengula ingane eneminyaka eli-15 ubudala yaqede yaphonswa ebhulohweni elingenela kuyona le ndawo.
Le ntombazanyana kuthiwa yathathwa abantu besilisa ababehamba ngemoto ngoMgqibelo mhla zili-13 kuMfumfu (October) ngesikhathi izihambela emgwaqeni babe sebeyihogelisa indwangu okusolwa eyayinezidakamizwa ukuze idakwe bese bahamba nayo. Kuthiwa babe sebezitika ngayo ngokocansi base beyibuyisa bayiphonsa ebhulohweni lakulendawo ngeSonto mhla zili-14 kuMfumfu (October) watholwa amalunga omphakathi.
UMnu Phungula utshele i-Echo ukuthi basashaqekile ngalesi senzo kanti futhi bakhathazekile ngendlela ubugebengu obuqhubeka ngayo kulendawo.
“Imibiko kadokotela iveza ukuthi le ngane yadlwengula abantu abayisithupha. Le ngane isihlukumezekile kanti futhi ayisenako ukuzethemba ngenxa yalezi zigila mkhuba.Lento abayenzile nje ubugebengu nokuba nonya ngoba akukhombisi ukuthi bebefuna ukuyibulala le ngane kodwa bebefuna ukuyinukubeza nje kuphela.
“Iyasikhathaza kakhulu lento ngoba ziningi izimoto zezigebengu ezibonakala zizulazula lapha emphakathini wethu zibamba abantu inkunzi, ziphuca abantu izimoto zingena ngisho emizini phakathi zintshontshe ngisho impahla ekhona phakathi. Into engifuna ukuyidlulisa nje emphakathi ukuthi kumele uziqaphele lezi zimoto uphinde ubike futhi uma kukhona okusolisayo abangakuboni kahle. Uma kungukuthi bayasaba ukubikela amaphoyisa ababikele izinhlangano ezikhona emphakathi kanye nathi amaphoyisa thina sizobe sesiya emaphoyisa,” kubeka yena.
Uqhube wathi okubakhathaza kakhulu nabafuna ukuthi umphakathi ukuqaphele ukuthi lezi zigilamkhuba azikho nje endaweni yase-Ashdown kuphela kodwa zikhona nasendaweni yase-Edendale kanti futhi zisebenzisa izimoto ezahlukene nokwenza ukuthi kube nzima ukuziqhaphela.
“Siyawunxusa umphakathi wethu ukuba sisenenzisane ukuze sizokwazi ukunqoba lobu bugebengu. Izigebengu azikufanele ukuhlala nabantu emphakathini.”
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu uSergeant Mthokozisi Ngobese usiqinisekisile isigameko wathi bekungakaboshwa muntu.